Yan Aung: English4Bloggers Helpdesk လုပ်ကြရအောင်လား...
ကိုရန်အောင်ရေ အားပေးသဗျ ... ဆက်လုပ်ပါ လိုတာ ၀ိုင်း ကြတာပေါ့ ... :D
ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်စာ ပရိုဂရမ်မှာ
အားလုံး ၀ိုင်းပြီး ကြိုးစားကျတာပေါ့။
website လုပ်ရင် ကောင်းမလား ဆိုတာတော့
လုပ်ပါကိုရန်အောင်ရေ။ အားပေးပါတယ်။ ဘလော့လုပ်မလား ဒိုမိန်းဝယ်မလားကတော့သိပ်မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘလော့မှာလုပ်ရင် ဒိုမိန်းမှာလုပ်တာနဲ့သိပ်မကွာရင်တော့
ပိုက်ဆံအကုန်မခံပါနဲ့။ အကြံပေးကြည့်တာပါနော်။ သိပ်တော့မသိဘူးလေ။ တတ်နိုင်ရင်တော့ ပါချင်ပါတယ်။
ကောင်းတယ်ဗျာ။ domain ဝယ်ပြီးလုပ်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့ ။ Forum တွေ chatting တွေ ထည့်လို့ ရတာပေါ့။ Newsletter တို့ ဘာတို့ sent လို့ ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံ ကုန်မှာများမယ်ဆို ရင်တော့ domain မဝယ်ပါနဲ့ ။ဝိုင်းကြဝန်းကြတာပေါ့ဗျာ။
ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ ကိုရန်အောင်ရေ။ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကူညီပါ့မယ်။
I am really glad to hear that. Congratulation Ko Yan Aung. Great Idea! I would like to participate if you allow me. I am Kyaw Zay Ya @ Jeep because i was born in jeep car :P. I am from Singapore studying mass communication. I would like to suggest you that is you should buy domain. Also would like to support as much as I can but I am very poor in blog experience.
ခုလိုအားပေးကူညီဖို့ ကမ်းလှမ်းကြတာကို သိရတော့ အားတက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာ.
Domain ၀ယ်ပြီး သေချာ လုပ်သွားပါမယ်. ရေရှည်တည်တံ့နိုင်အောင်၊ Features တွေ စုံလင်အောင် ထည့်နိုင်ဖို့လည်းဖြစ်အောင် ဒိုမိန်းဝယ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆမိလို့ပါ...
ဒီကော်မန့်အောက်မှာ ၀င်ရေးပေးတဲ့ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများကို အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့် သတ်မှတ်ပြီး ဆက်သွယ်ပေးသွားပါမယ်.
ကောင်းတဲ့ အကြံပါ ကိုရန်
ပထမတော့ ဘလော့ဂ်အနေနဲ့ ရေးသင့်ပါတယ်။ ပို့စ်တွေနဲ့ အရှိန်ရလာတော့မှ Website လုပ်ဖို့ စဉ်းစားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။